လူသားအားလုံးအတွက်: November 2011
ခင်ပွန်း ကို သတ်ပြီး ချက် စား သူ ဇိနတ်ဘီဘီ
အသက် ၃၂ နှစ် ( အချို့သတင်း များ တွင် ၄၂ နှစ်) အရွယ် ရှိ ဇိနတ် ဘီဘီ သည် အသက် ၁၇နှစ် အရွယ် ရှိ သူမ ၏ သမီး ဖြစ်သူ အား လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စော်ကား မှု ပြု ရန် ကြံစီ သောကြောင့်သတ် ဖြတ် ရ ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
သူမ နေ ထိုင် ရာ ကရာ ချီ တောင် ဘက် က ဆင်း ရဲ သား ရွာ ကလေး
သန် မာ လှ သော သူ့ခင်ပွန်း ကို လက်ဖက် ရည် ထဲ တွင် အိပ်ဆေး များ ခတ် ကာ အိပ်ပျော်နေချိန် ရောက် မှာ ကြိုး နှင့် တုပ်ပြီး သတ် ဖြတ် ရခြင်း ဖြစ် သည် ဟု ဇိနတ် ဘီဘီ က ကရာ ချိ ရဲများ ကို အစစ်ခံသည်။
သတ်ဖြတ် မှု တွင် ကြံရာ ပါ နှင့် ကူညီ ခဲ့ သည့် ဇိနတ် ဘီဘီ ၏ တူ ကို လည်း ရဲတပ် ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထား သည် ဟု သိရသည်။
သူမ ၏ ခင်ပွန်း ကို သတ်ဖြတ် ပြီး နောက် ဆင်းရဲ သည် က တစ်ကြောင်း ၊ အလောင်းဖျောက်ရန်အခက် အခဲ ရှိ သည် က တစ်ကြောင်း တို့ကြောင့် တုံး တစ်ပြီး ချက် ပြုတ် စား ရန် စီစဉ် ခြင်းဖြစ်သည် ဟု CNN တိုက်ရိုက် ရုပ်သံ တွင် သူမ က ပြောကြား ခဲ့ သည်။
ခင်ပွန်း ကို သတ် ဖြတ် ပြီး နောက် ချက် ပြုတ် ရန် အတွက် စီစဉ် နေခိုက် အနံ အသက် ဆိုးများထွက်လာ ချိန် တွင် အိမ်နီးနားချင်း များ က သိရှိ ပြီး ရဲစခန်း သို့အကြောင်းကြား ရာ မှ အသားတုံးများ ဦးခေါင်းများ နှင့် အတူ ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီး ရ မိ ချိန် တွင် ပေါင် သား အချို့ကို မဆလာ နိုင် နိုင် နှင့် ချက်နေ ပြီ ဖြစ်သည်။
Source by :http://freedomnewsgroup.com/
Posted by မောင်စေတနာ at 8:31 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
လိင်ဆက်ဆံမှု စစ်တမ်းအရ အင်ဒိုနီးရှားက ထိပ်ဆုံးကပြေး
အာရှ ၁၀ နိုင်ငံက လိင်ဆက်ဆံရေးမှာ တက်ကြွတဲ့ လူတွေအကြား စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ အင်ဒိုနီးရှား ယောက်ျား တွေက လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ရေ အများဆုံးနဲ့ ထိပ်ဆုံးစာရင်းက ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို Pfizer ဆိုတဲ့ လူက လုပ်တာပါ။
သူ့ရဲ့အာရှလိင်မှုဆိုင်ရာစံနမူနာပြ စစ်တမ်းမှာ အင်ဒိုနီးရှားယောက်ျားတွေက တလကို ပျမ်းမျှ ၉.၈ ကြိမ်၊ ဖိလိပိုင်က တလ ပျမ်းမျှ ၉.၄ ကြိမ်နဲ့ အိန္ဒိယက တလ ပျမ်းမျှ ၈.၈ ကြိမ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းယောက်ျားတွေကတော့ တလ ပျမ်းမျှ ၇.၇ ကြိမ်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီစစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်တွေကို မနေ့က ဘန်ကောက်ဟိုတယ်တခုမှာ ထုတ်ပြန်လိုက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှာ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလိပိုင်၊ စင်္ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ယောက်ျား ၁၆၅၈ ယောက်နဲ့ မိန်းမ ၁၆၂၄ ယောက်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဖြေ ကြားသူအကုန်လုံးဟာ အသက် ၃၁ နှစ်နဲ့ ၇၄ နှစ်အကြား ရှိပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လ အတွင်းက လိင်ဆက်ဆံမှု ရှိသူတွေ ဖြစ် ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး အဖြေရှင်တွေထဲမှာ အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ တလကို ပျမ်းမျှဆက်ဆံမှု ၈.၇ကြိမ် အများဆုံးပဲလို့ ဖြေပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားအမျိုးသမီးတွေကတော့ တလမှာ ပျမ်းမျှ ၆.၈ ကြိမ် လောက်ပဲ ရှိ တယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ ထိုင်းအမျိုးသမီးကတော့ တလကို ၅.၇ ကြိမ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်လို့ စစ်တမ်းအရ သိရပါ တယ်။
လိင်တံမာကြောမှုက လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကျေနပ်မှုရဖို့အတွက် အဓိကအချက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အာရှ သားတွေအကြားမှာ ဖော်ပြနေတယ်လို့ စစ်တမ်းက တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအချက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို မလေးရှား ယောက်ျား ၉၀%က ပြောဆိုကြပါတယ်။ ၃ပုံ ၁ပုံလောက်ကပဲ လိင်ဆက်ဆံမှု ကြာညောင်းချိန်က လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ကျေနပ်စရာ တခုအနေနဲ့ ခံစားရကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
ထိုင်းမှာ ခန့်မှန်းခြေ ယောက်ျား ၂.၇ သန်းလောက်ဟာ လိင်တံမာကျောမှု မရှိတော့တာ လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ ထိုင်း နိုင်ငံက ထင်ရှားတဲ့ လိင်ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဖန်ဆာ့က်က ပြောပါတယ်။
ဒီအထဲက ၂၇,၀၀၀ လောက်ပဲ လာရောက်ကုသမှု ခံယူတာ လုပ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဆေးဝါးတွေအပြင် နေထိုင်မှုပုံစံ အ ပြောင်းအလဲကလည်း ဒီရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ ဖန်ဆာ့က် က ပြောပါတယ်။ “ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခဏ်း လုပ် တာနဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအသောက်စားဖို့လည်း အကြံပြုပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁ (The Nation)
Source by : http://www.nationmultimedia.com
Posted by မောင်စေတနာ at 11:03 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ မဟာချိုင်ဒေသ ၀တ်တလွန်ကျောင်းမှာ သတင်းသုံးနေသော နိုင်ငံခြားသား စာသင်သံဃာ (၁၂၃) ပါးဟာ ရေဘေးကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်မှ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဝင် တဦးဖြစ်သူ ကိုဖိုးခွားကပြောပါသည်။ ဤအခက်အခဲကို ၀က်တလွန်ကျောင်း၌ သတင်း သုံးနေသော အရှင်ဦးပုညက မြန်မာဒကာဒကာမများထံမှ အကူအညီတောင်းခံပြီး၊ လိုက်လံအကူအညီပေးနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
“အရှင်ဦးပုည ကတော့ ၀က်တလွန်မှာကျောင်းမှာ စာသင်နေတယ်လေ။ ရေကြီးလို့ ရေလွတ်ရာ မဟာချိုင်အနောက် ဖက်ခြမ်းကို ပြောင်းရွေ့လိုက်ပါတယ်။ ကျန်ရစ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား သံဃာတွေရဲ့ အခြေနေတွေကို သိလို့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေထံ အလှူခံပြီး အဲဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ သံဃာတွေကို ဆန်၊ ငါးသေတ္တာ၊ ခေါက်ဆွဲထုတ်၊ ရေသန့်ဗူး တွေကို သွားရောက်လှူတန်းခဲ့တာ (၃)ကြိမ် ရှိနေပြီးဖြစ်သည်ဟု”ဆိုပါသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ ရေဘေးအခြေအနေနှင့် ပါတ်သက်ပြီး၊ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း ရေဘေးမှ မကြာခင် ကင်းဝေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်မှူးများ အပါဝင် စစ်တပ်ကိုလည်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခိုင်းပါသည်၊ အခြေအနေမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနေပြီးဟု ဆိုပါသည်။ အလားတူ မဟာချိုင်ဒေသ၌လည်း၊ ရေလျော့ကျ လာနေခဲ့ပါသည်။
“ရေတော့ ကျတော့ကျတယ်။ ကျတာကလည်း တ၀က်လောက်တောင်မှ မရှိသေးဘူး။ အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ မြန်မာသံဃာတွေ ရှိသေးတယ်။ အခုအကြိမ်ကတော့ မြန်မာစာသင်သား သံဃာတွေကတော့ တစ်ပါးမှ မရှိတော့ဘူးလေ။ ရေကြီးလို့ နီးစပ်ရာမြန်မာရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ အနီးနားမှာ သူ့အဆက်သွယ်နဲ့ သူနေထိုင်ကြသလို ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ ရေမရောက်တဲ့ နေရာမှာလည်း အဆင်ပြေသလို အခန်းစုငှားပြီး နေကြပြီးတော့ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြ တာလည်း ရှိပါတယ်။ အဆက်သွယ်မရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖင်လန် နိုင်ငံခြားသား ဘုန်းကြီးတွေကတော့ ရေကြီးတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ ၀က်တလွန်မှာပဲ ကျန်ရစ် နေကြတယ်လေ” ဟု ပြောပါသည်။
နိုင်ငံခြား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းသံဃာတော်များအား ရေဘေး အကူညီပေးနေသော အဖွဲ့များက လာရောက်ကူညီပေးခဲ့သည်ကို မတွေ့ရှိရသော်လည်း မြန်မာအဖွဲ့တချို့ကသာ ကားနဲ့ လာရောက်ပြီး အကူညီပေးခဲ့သည်ဟု အရှင် ဦးပုည သထ္ထကပြောပါသည်။
မြန်မာသံဃာတော်များလည်း နီးစပ်ရာ မြန်မာအလုပ်သမားများကြား သတင်းသုံးတော်မူကြ (ဓါတ်ပုံ - အင်တာနက်)
၀က်တလွန်းကျောင်း၌ မြန်မာရဟန်းတော် ၁၂၇ပါး ၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ၁၀၀ပါး ၊ ကမ္ဘောဒီယား ၂၅ ပါး၊ ကျန်သည့် အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ လာအို၊ ရဟန်းသံဃာစုစုပေါင်း အပါး ၃၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။ ယခုလိုရေကြီးချိန်၌မူ မြန်မာသံဃာတော်များက နီးစပ်ရာ မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ကြား၌ အဆင်ပြေစွာ သတင်းသုံးနိုင်သော်လည်း အဆက်သွယ်မရှိသည့် နိုင်ငံခြားသား သံဃာများမှာမူ ရိက္ခာအခက်အခဲများ ဖြစ်နေကြပါသည်။ ကူညီလိုသူများ ကိုဖိုးခွား (ဖုန်း(၀၈၁ ၁၀၃ ၆၃၇၅) ဖြစ်ပြီး၊ အရှင်ဝါယမ ဖုန်း 0804585128 တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်ဘက်တွင် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား (၄)သိန်းကျော် ရှိပါသည်။ ယင်းနေရာတွင် ရေးဘေး ဒုက္ခရောက်သူများသည် မြန်မာနိုင်သား အများစုဖြစ်သော်လည်း ဤ အထဲတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များလည်း ပါဝင်နေပါသည်။ တချိန်ထဲ၌ နိုင်ငံခြား စာသင်သားရဟန်သံဃာတော်များလည်း ရေဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက် နေကြပါသည်။
Source by :http://www.phophtaw.org/
Posted by မောင်စေတနာ at 6:29 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မလေးရှားရောက် ရခိုင်အမျိုးသား ၁၀၀ ခန့်က ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ဘီဘီစီကို ဆန္ဒပြ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော ရခိုင်အမျိုးသားများ ၁၀၀ ခန့်က ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံး ရှေ့သို့ သွားရောက်ပြီး ဘီဘီစီ ( အာရှ ပစိဖိတ် ဌာန)မှ ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံပေါ် ရေးသားဖေါ်ပြသော သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ အပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် သွားရောက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
Arakanese in Malaysia protest in British Embassy ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်သူ တဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုး ခိုင် နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
" ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ BBC အင်္ဂလိပ် Web Site မှာ အင်နာဂျုံးက ကျွန်တော်တို့ ရခိုင် နယ်မြေဒေသမှာ ကျွန် တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေရဲ့ ပုံကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို လုပ်လိုက်တာဟာ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ အတွက် သာမက မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါ စော်ကားရာ ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ခုလို သမိုင်းမှား၊ သတင်းမှားတွေကို ကမ္ဘာက သိအောင် BBC ကလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါဟာ မလုပ်သင့် မလုပ် ထိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့က ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။"
ဆန္ဒပြပွဲတွင် တောင်းဆိုခဲ့သည့် အချက်များကိုလည်း သူက ယခုလို ပြောသည်။
" အင်နာဂျုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို တရားဝင် တောင်းပန်မှုပြုဖို့ နောက်ပြီးတော့ BBC အနေနဲ့ သူမလို သတင်းမှားတွေကို တင်ပြပေးတဲ့ သတင်းထောက်၊ ၀န်ထမ်းတွေကို အလုပ်ဖြုတ်ပေးဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်" ဟု ဆက်ပြောသည်။
ဆန္ဒပြတွင် သံရုံးမှ တစုံတရာ ဟန့်တားခြင်း မပြုသည့်အပြင် ဆန္ဒပြသူများက သံရုံးထဲကိုဝင်ပြီး စာများ ပေး အပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
" ကျွန်တော်တို့ သံရုံးထဲထိ ၀င်ပြီးတော့ သံအမတ်ကြီးကို သွားတွေ့ကြပါတယ်။ သံအမတ်ကြီး ကတော့ သံရုံးမှာ မရှိတဲ့အတွက် သူရဲ့လက်ထောက် ပထမအတွင်းဝန် တယောက်က ကျွန်တော်တို့ ပေးတဲ့စာကို လက်ခံယူသွားပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ သံအမတ်ကြီးကို ပို့ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။"
ဆန္ဒပြပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော ရခိုင် အမျိုးသား ၁၀၀ ခန့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပိုစတာများကိုင်ကာ (၁)အန်နာဂျုံး -ချက်ချင်းဖြုတ်၊ ချက်ချင်းဖြုတ် ) (၂)လုပ်ကြံသတင်းမှား- အလိုမရှိ၊ အလိုမရှိ ) (၃)ရခိုင်မြေသည် -ငါရို့ မြေ၊ ငါရို့မြေ) ဟု ကြွေးကြော် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နိုဝင်္ဘာလ ၁၆ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၃၀ မှ နံနက် ၁၁း၃၀ (လန်ဒန်စံတော်ချိန်)ထိ ကမ္ဘာကျော် ဘီဘီစီ သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Anna Jone ၏ မှားယွင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ အတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဘီဘီစီ သတင်းဌာန ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ယူကေရောက် မြန်မာများက ပြန် လည် ဖြေရှင်းတောင်းပန်ရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာတွင် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က Asia-Pacific ဌာနမှ သတင်းထောက် Anna Jones ရေးသားသည့် Bleak outlook for Burma's ethnic groups ဆောင်းပါးတွင် သတင်းနှင့်အတူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဓါတ်ပုံကို ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံတွင် ပူးတွဲ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် မကျေနပ်များ တိုးပွားလာရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲကို နံနက် ၁၀ နာရီမှ စတင်ပြီး ၁၀ နာရီခွဲတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Source by :http://www.narinjara.com/
Posted by မောင်စေတနာ at 8:02 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ယခု လ ၁၆ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူ မြို့၊ Cameroon high land တွင် နေထိုင်သော ချင်းလူငယ် တဦး အား ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့ဇာတိဖြစ်သူ ထိန်လင်းဆို သူက ဓါးဖြင့် အသေထိုးသတ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
အသတ်ခံသူသည် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နေ ဦး ထိန်းခေါလိန်း နှင့် ဒေါ် လိန်းခေါနမ်၏သား ကီးလောဟာဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ အူတွေ ထွက်တဲ့ အထိ ဓါးနဲ့ ထိုးတယ်၊ လူနာကို ဆေးရုံခေါ်သွားကြပေမဲ့ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၁နာရီမှာ ဆုံးသွားတယ် ဘာဖြစ်လို့ ထိုးသတ်တယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူး”ဟု မလးရှားရောက် ချင်း စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကော်မီတီ (Chin Disciplinary Affairs Committee ဥက္ကဌ လာလ်းရှန်မွေးက ပြောသည်။
ထိန်လင်းကို Chin Community ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် Billy Tong Bung, Thang Lian, Pathang တို့က သူငှားသည့် နေအိမ်သို့ သွားရောက်ဖမ်းဆီးပြီး ရဲလက်ထက် အပ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
သေဆုံးသူ နှင့် ထိန်လင်းသည် အတူတူ အလုပ်လုပ်သူများဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ငြိုးရန်စ ရှိခဲ့ဘူးသူများဖြစ်နိုင် ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ယခု ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မလေးရှားရှိ UNHCR ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အကူအညီပေး ခဲ့ကြောင်း မလေးရှား နိုင်ငံရှိ ချင်းဒုက္ဒသည်တဦးထံမှ သိရှိရသည်။
Source by :ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန
Posted by မောင်စေတနာ at 11:26 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မောင်စေတနာ at 12:04 AM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မဟာချိုင် ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိ
ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် မြန်မာသံမှူးတို့ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသဖြင့် (၄)ရက်ကြာ တင်မာမှု ရှိနေခဲ့သော မဟာချိုင် ရေဘေး ကူညီရေး ယာယီစခန်းအား မဟာချိုင်နယ်မြေ ရေမနစ်မြုပ်ခင်အထိ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘန်ကောက်မြို့နှင့် ကီလိုမီတာ တစ်ရာကျော် ဝေးသည့် ရာ့ခ်ျဘူရီ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းသို့ ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းရာ ဝေလံသောကြောင့် သွားရောက်ရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် ဒုက္ခသည်များက ငြင်းဆန်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မဟာချိုင်နယ်မြေ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အရာရှိနှင့် မြန်မာသံမှူးတို့အပြင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကို ဦးဆောင်သည့် အသျှင်ဝါယမ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ (BAT)နှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများက အကျေအလည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြေလည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးဝါယမက “မနေ့က စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေခဲ့ရတာတွေ ပြေလည် သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ မနိုင်မနင်း မဖြစ်အောင်တော့ ဦးဇင်းတို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ကြဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ ဘာဖြစ်ဖြစ် အားလုံးစိတ်အေး သွားကြရတယ်’’ ဟု မိန့်တော်မူသည်။
ယမန်နေ့က စိတ်ဆင်းရဲ နေခဲ့ကြသည့် အလုပ်သမားများလည်း ၀မ်းသာ သွားကြသည့်အပြင် အလုပ်အသစ် ရရှိသွားသည့် အလုပ်သမား (၄၀)ကျော်တို့ စခန်းမှ ထွက်ခွာသွားသည်။ ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာသံရုံး အစီအစဉ်ဖြင့် အလုပ်သမား (၅၀)ဦးကိုလည်း နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင် ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရေဘေးသင့် နေကြသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားအနေဖြင့် ဖုန်းနံပတ် ၀၈၀-၄၅၈၅-၁၂၈၊ ၀၈၄-၆၇၀၅-၇၂၇၊ ၀၈၅-၁၅၈၈-၃၆၇၊ ၀၈၉-၄၁၃၃-၁၇၉၊ ၀၈၁-၀၈၇၁-၅၃၅၊ ၀၈၇-၇၅၅၀-၉၇၅၊ ၀၈၀-၅၅၂၂-၀၆၂ များသို့ ဆက်သွယ်ပြီး အကူညီ တောင်းခံနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Source by :http://www.ghre.org/
Posted by မောင်စေတနာ at 11:16 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဂိုးတစ်ဂိုး၊ ရှုံးပွဲတစ်ပွဲ နှင့်သမိုင်းမှတ်တိုင်သစ် တစ်ကြိမ် ရေးထိုးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သော မြန်မာအသင်း (မြန်မာ ၀-၁ မလေးရှား)
ဂိုးတစ်ဂိုး၊ ရှုံးပွဲတစ်ပွဲ နှင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်သစ်တစ်ကြိမ် ရေးထိုးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သော မြန်မာအသင်း (မြန်မာ ၀-၁ မလေး၇ှား)
ယနေ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့ တွင် ၂၆ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပလျက်ရှိနေရာ အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင် ပွဲစဉ်အဖြစ် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ-၂၃ အသင်း နှင့် လက်ရှိ ချန်ပီယံ မလေးရှားလက်ရွေးစင် ယူ ၂၃ အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ရာ မလေးရှားအသင်းက ၁-၀ ဖြင့် အနိုင်ရပြီး ဖိုင်နယ်လ်တက်သွားခဲ့သလို မြန်မာအသင်းမှာမူ တတိယလုပွဲအတွက် ဆက်လက်စောင့်စားရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ပွဲအစပိုင်းတွင် မြန်မာအသင်း ရော မလေးရှားနိုင်ငံအသင်းကပါ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် တိုက်စစ်ဖွင့် ကစားခဲ့ခြင်း မရှိပဲ အခွင့်ကောင်းခြောင်းမြောင်း ကစားနေခဲ့သလို မလေးရှားနိုင်ငံအသင်းကလည်း ခံစစ်ကို အားပြု ကစားနေခဲ့သည်။
မြန်မာအသင်းမှာ ပထမပိုင်း ပွဲချိန်ပြီးဆုံးချိန်အထိ မလေးရှား အသင်း ပင်နယ်လ်တီ ဧရိယာထိပ်နားမှ အလွတ်တည်ကန်ဘော ၄ ကြိမ်အထိ ရရှိခဲ့သော်လည်း ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသလို ထောင့်ကန်ဘော ၃ ကြိမ်မှလည်း ထိရောက်သော ခြိမ်းခြောက်မှု ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
မလေးရှား အသင်းမှာမူ ရရှိခဲ့သော ပြစ်ဒဏ်ဘော တစ်ကြိမ်ကို ကန်သွင်းခဲ့ရာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်း ဂိုးတိုင်အပေါ်ထောင့် နားမှ ဖြတ်ထွက်သွားခဲ့ရာ ပရိသတ်များ အသဲယား သွားစေခဲ့သည်။ ပထမပိုင်း ပြီးဆုံးသွားချိန်အထိ မြန်မာအသင်း နှင့် မလေးရှားအသင်းတို့မှ ထိရောက်သော ဂိုးသွင်းခွင့်များ မရရှိပဲ ဂိုးမရှိသရေဖြင့်သာ ပွဲကို ရပ်နားခဲ့ရသည်။
ဒုတိယပိုင်း ပြန်လည် စတင်သည်နှင့် မလေးရှားအသင်းက အလျှင်အမြန် တိုက်စစ်ဆင် ကစားလာခဲ့ရာ မြန်မာအသင်း အနေဖြင့် မလေးရှားကွင်း သုံးချိုးတစ်ချိုးအထိ ဘောလုံးရောက်ရေးပင် မနည်းကြိုးစားခဲ့ရပြီး မလေးရှားအသင်း၏ တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ် ထိုးဖေါက်မှုများကို မြန်မာနောက်တန်းလူများက ပိပိရိရိ ဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့မှုကြောင့်သာလျှင် မြန်မာအသင်း အဖွင့်ဂိုး မပေးခဲ့ရသော်လည်း ပွဲချိန် ၈၄ မိနစ်တွင်မူ မြန်မာအသင်းနောက်တန်းလူများ၏ မသေမချာ ဖျက်ထုတ်မှုမှတဆင့် မလေးရှားတိုက်စစ်မှူး က ဂိုးသမားနှင့် အနီးကဒ် ပိတ်သွင်းခဲ့ပြီး အဖွင့်ဂိုး နှင့် အနိုင်ဂိုးကို ရယူသွားခဲ့သည်။
လက်ကျန်မိနစ် ဆယ်မိနစ်ခန့် အချိန်အတွင်း မြန်မာအသင်းက ဂိုးရရှိရေးအတွက် အပြင်းအထန် ကြိုးစားခဲ့သေးသော်လည်း လက်ရှိချန်ပီယံ မလေးရှားအသင်း၏ ခြေစွမ်းကို ကျော်လွန် အနိုင်ရခြင်း မရှိပဲ ၁၉၇၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အရှေ့တောင်အာရှ ပွဲစဉ်များအတွင်း ချန်ပီယံ မဖြစ်တော့သည့် စံချိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း သွားခဲ့သည်။
Source by :http://mutdfan.com/
Posted by မောင်စေတနာ at 10:29 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: မလေးရှားသတင်း, အားကစား
မြန်မာများ စင်ကာပူတွင် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် ရရန် ပိုမိုခက်ခဲလာ
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ကာ စင်ကာပူ၏ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရန် လျှောက်ထားခဲ့သည့် မြန်မာများ ပယ်ချခံခဲ့ရမှု များလာသည့်အပြင် လျှောက်ထားရာတွင် ပိုမိုခက်ခဲလာခဲ့သည်ဟု စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
အကြောင်းမှာ စင်ကာပူအစိုးရ၏ အလုပ်သမားရေးရာနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများကြောင့် အစိုးရကျောင်းဆင်းများသည်ပင် စင်ကာပူ၏ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်(PR) ရရှိရန်ပိုမို ခက်ခဲလာခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
“ကျွန်တော်ဆို Spass နဲ့ စင်ကာပူမှာနေတာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က PR ရလိုရငြားလျှောက် ခဲ့တယ်။ ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်” ဟု စင်ကာပူရှိ ဘွန်လေးတွင် နေထိုင်သည့် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
PR ကိုတော့ မလျှောက်ဖြစ်ဘူး။ အခုအချိန်မှာ ကိုယ်ရတဲ့လစာ အနေအထားက မြင့်နေတယ်။ PR ဆို အခွန်ဆောင်ရတာတွေက အစ နည်းနည်းမြင့်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် PR မလျှောက်ဘူး . . .
“အခုအချိန်မှာ PR လျှောက်တဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းကို အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး ထိန်းချုပ်မှု၊ ကန့်သတ်မှု အမြောက်အမြား လုပ်ခဲ့တယ်။ စင်ကာပူ သတင်းစာတွေထဲမှာလည်း အမြောက်အမြား ဖော်ပြထားပြီးခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလောက် ကတည်းက PR ပေးတာတွေ လျှော့ချခဲ့ကြတယ်။ အစိုးရကျောင်း ပြီးထားတဲ့သူတွေထဲမှာတောင် အခုအချိန်မှာ PR လျှောက်ထားရင် အရမ်းကိုကန့်သတ်ချက် များနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရကျောင်းတက်ပြီး လို့ ဘွဲ့ရတဲ့အခါ သုံးနှစ်စာချုပ်နဲ့ စင်ကာပူမှာ အလုပ်ပြန်လုပ်ပြီးရင် သူ့ရဲ့အရည်အသွေး၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ် မူတည်ကာ PR လျှောက်ထားမှု ပြုနိုင်ကြတယ်”ဟု အစိုးရတက္ကသိုလ် SMU ၏ Assistant Director Mr. Andrew Low Kim Khoon က ရှင်းပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အချို့မှာလည်း နေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစားနှင့် လစာကောင်း ရရှိထားမှုပေါ် မူတည်ကာ စင်ကာပူ PR ကို လျှောက်ထားခြင်း မပြုသူများလည်း ရှိနေကြသည်။
“ကျွန်မဆို ဒီက အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုမှာတက်ပြီး အခု ပရောဂျက်တစ်ခု စ၀င်နေပြီ။ PR ကို တော့ မလျှောက်ဖြစ်ဘူး။ အခုအချိန် မှာ ကိုယ်ရတဲ့လစာ အနေအထားက မြင့်နေတယ်။ PR ဆို အခွန်ဆောင် ရတာတွေကအစ နည်းနည်းမြင့်တယ်။ ဒါကြောင့် PR မလျှောက်ဘူး”ဟု NTU တွင် မာစတာပြီးထားသည့် ကျောင်းသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ စင်ကာပူရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဟောပြောပွဲ ကောက်နုတ်ချက်များ အရ နောင်တွင် စင်ကာပူကျောင်း တက်ရောက်မည့် အလယ်တန်းအဆင့် မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံစုံမှလူငယ်များမှာ စင်ကာပူအစိုးရ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခွင့်ကိုလည်း တိုးမြင့်ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို MSI ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာက ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
မြန်မာကျောင်းသားများ စင်ကာပူ PR အား ၂၀၀၇ ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ လွယ်ကူစွာ လျှောက်ထားရ ရှိခဲ့ကြသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့ရများမှာ စင်ကာပူတွင် အလုပ်ရရပြီး S passဖြင့် နေထိုင်ကာ PR လျှောက်ခြင်း၊ ပေါ်လီတက်ရောက်ပြီးသူများမှ PR လျှောက်ခြင်းများကို အများဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
စင်ကာပူတွင် ဇွန်လကုန် လူဦးရေစာရင်း ထုတ်ပြန်ချက်များအရ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ဦးရေ ၃ ဒသမ ၇၉ သန်း၊ နိုင်ငံခြားသား ၁ ဒသမ ၃၉ သန်းရှိပြီး ယင်းတို့ထဲမှ ၃ ဒသမ ၂၆ သန်းမှာ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် ၀ ဒသမ ၅၃ ဦးရေမှာ စင်ကာပူတွင် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် ရထားသည့်လူများ ဖြစ်ကြောင်း ကောက်နုတ်ချက်အချို့ကို Myanmar Search International ပညာရေး ၀န်ဆောင်မှုမှ သိရှိရပါသည်။
Source by :http://first-11.com
Posted by မောင်စေတနာ at 12:20 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Facebook ပိတ်တော့မည်ဟု Facebook စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့ နှံ့ 
Facebook ကြီးသာ ပိတ်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ.. ? ။
Zuckerberg ဟာ Facebook ကို ၂၀၁၂ မတ်လ ၁၅ရက်နေ့တွင် အသုံးပြုသူများ အနေနှင့် Facebook အကောင့်များကို ပိတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ Facebook မရှိဘဲ နေနိုင်အောင် နေပေးကြပါလို့လဲ ပြောသွားပါတယ်။
"မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှာ Website ကြီး တစ်ခုလုံး ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်" လို့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ "အဲဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို လိုချင်သေးရင် Facebook ပေါ်က ပြန်ယူထားဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Facebook ပိတ်လိုက်ရင် ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး" လို့လည်း ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
Zuckerberg ကတော့ Facebook ကိုပိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတာဟာ သူ့အတွက် အရမ်းကို ခက်ခဲကြောင်းနဲ့ သူ ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူတွေကို ၀မ်းမနည်းစေချင်ပါဘူးလို့လဲ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောသွားပါသေးတယ်။
"ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ အဲဒါ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထင်တယ်ခင်ဗျ" ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေကြားသွားပါတယ်။ "ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံရရင် ကျွန်တော် အဲဒီလိုလုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook မရှိရင် လူတွေဟာ အပြင်ထွက်ပြီး တကယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ကြမှာပါ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။"
Facebook သုံးစွဲသူ တချို့ကတော့ အဲဒီသတင်းကို ကြားပြီး ထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒီယားနား ပြည်နယ်မှ အထက်တန်းကျောင်းသား Denise Bradshaw ဆိုရင် "ကျွန်တော် Facebook သာမရှိရင် ဘာလုပ်နေရမလဲ?" လို့ ငြီးငြူခဲ့ပါသေးတယ်။ "ကျွန်တော့် ဘ၀က Facebook က အဓိကပါ။ ကျွန်တော် Facebook ကို တစ်နေ့ ၁၀ နာရီလောက် သုံးပါတယ်။ အခု Facebook မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့် အဲဒီအချိန်တွေကို ဘယ်နားသွားသုံးရမလဲဗျာ?"
သို့ပေမယ့် မိဘတွေကတော့ အဲဒီသတင်းတွေကြားပြီး စိတ်သက်သာရာရခဲ့ပါတယ်။ "Facebook ပိတ်သွားတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်" လို့ Detroit မှ မိဘတစ်ဦးဖြစ်သူ Jon Guttari မှ ပြောသွားပါတယ်။ "အဲါးဆို ကျွန်တော့်ကလေးက ကွန်ပျူတာနဲ့ မျက်နာကို နေ့တိုင်း ကပ်မနေတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောဖို့ အချိန်ပိုရနိုင်တာပေါ့" လို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြောသွားပါတယ်။
from facebook's friends Avan Wang (王天) & John Htoi Aung
Source by :http://weeklyworldnews.com/headlines/27321/facebook-will-end-on-march-15th/
Posted by မောင်စေတနာ at 1:00 AM7comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအတွက် စစ်အစိုးရက တရားဝင် ထုတ်ပေးသော ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ပတ်စပို့) ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: RFA)
တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေကို မလေးရှား အစိုးရက လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာသံရုံးမှာ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပတ်စပို့ လျှောက်တဲ့အခါ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အခက်တွေ့နေရကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးမှာ ပတ်စပို့ လျှောက်တဲ့အခါ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် ပုံစံဖြည့်စွက် တင်ပြရပြီး သံရုံးက အမှတ်စဉ် နံပါတ် ထုတ်ပေးပါတယ်။ အမှတ်စဉ် အလိုက် ခေါ်ယူရာမှာ မိမိတို့ အလှည့် ရောက်မရောက် ဖုန်းဆက်မေးရင် သံရုံးက မဖြေကြားတဲ့ အတွက် အကြိမ်ကြိမ် ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ကြည့်ရှုကြရတာကြောင့် အချိန်ကုန် အလုပ်ပျက်ကြရတယ်လို့ အလုပ်သမားများ အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့Burma Campaign Malaysia တာဝန်ခံ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
အားလုံး ပြီးစီးလို့ ပတ်စပို့ စာအုပ် ထုတ်ယူတဲ့ အခါမှာလည်း စာရွက် စာတမ်းကြေး ဆိုပြီး ပြေစာမရဘဲ ရင်းဂစ် တစ်ဆယ် ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်း မြန်မာ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို မြန်မာ သံရုံးမှာ ဒုက္ခမခံနိုင်တဲ့သူတွေက မြို့ထဲက လက်ခွဲ အလုပ်သမား အေးဂျင့်တွေဆီမှာ ဝန်ဆောင်ခ ရင်းဂစ် ခုနစ်ရာ ရှစ်ရာပေးပြီး ပတ်စပို့တွေ လွယ်လွယ် ကူကူ ရနေကြောင်းလည်း ကိုထွန်းထွန်းက ပြောဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပတ်စပို့ စာအုပ်တစ်အုပ် အတွက် မလေးရှား ရင်းဂစ် ၄၈၀ ပေးရပေမဲ့ တခြား နိုင်ငံတွေကို သွားလာခွင့် ရှိကြောင်း စာအုပ်မှာ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံစာ ထည့်မပေးဘူးလို့ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
မလေးရှား အစိုးရရဲ့အဆိုအရ မှတ်ပုံတင်သူ တရားမဝင် မြန်မာ အလုပ်သမား နှစ်သိန်း သုံးသောင်းလောက် ရှိပါတယ်။ ပတ်စပို့ လျှောက်ထားသူတွေကို မြန်မာသံရုံးက တစ်နေ့ ဦးရေ (၂၅၀) နှုန်းနဲ့ ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Source by :Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
Posted by မောင်စေတနာ at 2:03 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မဟာ ချိုင် ရေး ဘေး သင့် မြန် မာ များ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ရေကြီးမှုမှာ မြန်မာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီ အလုပ်အလုပ်နေကြတဲ့ မဟာချိုင်ဒေသမှာ ရေဘေး ဒုက္ခခံနေကြရပြီး မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ စခန်းဖွင့် ကူညီနေရတယ်လို့ ရွှေတွံ့တေးဆရာတော် အရှင်ဝါယမက ဒီဗီဘီကို မိန့်ပါတယ်။
ရေက ဒီနေ့မှာပိုတက်လာပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ရေလွတ်ရာ တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအလုပ်သမားတွေ လုပ်ကိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေပိတ်ထားပြီး နေအိမ် တိုက်ခန်းနဲ့ တန်းလျား​​တွေ​ ​ရေမြုပ်ကုန်တာကြောင့် ကားနဲ့ ကြိုပြီး ဘုန်တော်ကြီးကျောင်းမှာ စခန်းဖွင့်ပေးထားတာလို့ မဟာချိုင်မြို့နယ်၊ ၀တ်ခေါင် မေးဒေးယား ဘုန်းတော်ကြီး​ကျောင်းက ဆရာတော်အရှင်ဝါယမက မိန့်ပါတယ်။
“မနေ့ကပဲ စခန်းကို ဖွင့်လိုက်တာ။ အလုပ်သမား တရာလောက် ရောက်နေပြီ။ ရေက အကျမရှိဘဲ ဆက်တိုက် တက်လာတဲ့အခါကျတော့ အကုန်လုံး ပြေးရတာပေါ့။ တချို့ အလုပ်ရုံတွေကတော့ နည်းနည်း အဆင်မပြေဘူး။ အလုပ်ရှင်တွေက ထိုင်း အလုပ်သမားတွေကို လစာတွေ ချက်ချင်း ရှင်းပေးလိုက်တယ်။ နေရာတွေ ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားတွေကိုလည်း နေရာတွေ ရွှေ့ပေးတယ်။ ဗမာတွေကျတော့ ခနနေဦး စဉ်းစားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီအတိုင်း ထားတယ်။ ရေက တက်လာတော့ အကုန်လုံး ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ အဲဒီလိုဟာတွေ သတင်းရရင် ချင်ချင်းသွားရတာပေါ့။”
အလုပ်သမားတချို့က စနစ်တကျနဲ့ ရေလွတ်ရာကို ထွက်လာနိုင်ကြပေမယ့် အပြင်ပတ်ဝန်းကျင် မသိတဲ့တချို့က နေရာမှာပဲ ထိုင်နေကြပြီး​ ထွက်မလာတတ်ကြဘူးလို့လည်း​​ ​ရှင်းပြပါတယ်။
မဟာချိုင်က ရေဘေးသင့်​​​ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို သံဃာတော်တွေ၊ မြန်မာတွေကပဲ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြရပြီး မြန်မာသံရုံးကလည်း ကူညီပေးဖို့ အကျိုးအကြောင်း ဒီနေ့ လာလျှောက် သွားတယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
“မနက်ဖြန်ကို သံရုံးက လာမယ်ပြောတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ သူတို့နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ထိုင်းအဖွဲ့ပေါ့။ အလှူရှင်တွေပေါ့ လာကြည့်သွားတယ်။ သူတို့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့​ အကြောင်းပေါ့။ သံရုံးကလည်း ထိုင်းအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး သူတို့ စောင်ရှောက်ပေးနေတယ် ​ပြောတယ်။ ဒီမှာလည်း လိုတာကြည့်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ သူတို့ စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း လာလျှောက်တယ်။”
အခုလက်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ဒုက္ခသည် တထောင်ကျော်ကျော်ထိ လက်သင့်ခံထားနိုင်​ပေမယ့်​ အစားအသောက်နဲ့​ ​ရေကိုတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပက​ ​မြန်မာတွေအနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ပေးမှ ရမယ်လို့ မိန့်ကြားသွားပါတယ်။
“အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ဓာတ်အင်အားရော၊ ငွေကြေးအင်အားရော တတ်နိုင်သလောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါ။ ထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။”
မဟာချိုင်ဒေသက မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ မဟာချိုင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖုန်း ၀၈၀-၄၅၈၅-၁၂၈၊ ၀၈၉-၄၁၃၃-၁၇၉၊ ၀၈၉-၆၈၅- ၂၉၆၆၊ ၀၈၄-၆၇၀-၅၇၂၇ တို့ကို ဆက်သွယ် အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ကြသလို၊ ရေဘေးသင့်နေသူတွေကိုလည်း အဲ့ဒီဖုန်းတွေဆက်ပြီး ကူညီပေးနိုင်ကြပါတယ်။
Posted by မောင်စေတနာ at 11:23 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ UNHCR ဒုက္ခသည်နှင့် ခိုလှုံသူများ ဇန်န၀ါရီလတွင် မှတ်ပုံတင်ရန်
မလေးရှား အစိုးရအနေနှင့် UNHCR အထောက်အထားကိုင်ဆောင်ထားကြသည့် ဒုက္ခသည်များနှင့် နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူများကို ဇန်န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၂ တွင် စတင် မှတ်ပုံတင် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း UNHCR ကိုယ်စားလှယ်မှ ပြောကြားသည်။
ယခုကိစ္စသည် ဒုက္ခသည်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ် မလေးအစိုးရနှင့် UNHCR တို့၏ သဘောတူညီမှုတခုဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ နှင့် UNHCR တို့ ပူးပေါင်းအားထုတ် ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်များ အများဆုံးနေထိုင်ရာ နေရာများတွင် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်မည့် အချိန်နှင့်နေရာတို့ကို UNHCR မှနေ၍ ဒုက္ခသည်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဆက်သွယ်ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး UNHCR အထောက်အထားရှိသည့် ဒုက္ခသည်နှင့် ခိုလှုံသူများအားလုံး မလေးအစိုးရနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း UNHCR ၏ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် Alan Vernon မှ ပြောကြားသည်။
ယခုပြုလုပ်မည့် ဒုက္ခသည်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် မလေးရှားပြည်ထဲရေးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော 6P အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သတ်မှုမရှိဘဲ သပ်သပ်စီဖြစ်ကြောင်း Alan Vernon မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ယခုအချိန်အထိ UNHCR-Malaysia နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော ဒုက္ခသည်နှင့် ခိုလှုံသူစုစုပေါင်း ၉၅၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး ၄င်းတို့မှာ မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဆိုမာလီ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် အီရတ်နိုင်ငံတို့အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြသူများ ဖြစ်သည်။
ယခုမလေးရှား အစိုးရနှင့် ဒုက္ခသည်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စသည် အခြားသောနိုင်ငံများနှင့် UNHCR တို့ သဘောတူထားကြသည့်အချက်ဖြစ်သော UNHCR အထောက်အထား ကိုင်ဆောင်သူ ဒုက္ခသည်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်သည့်အစိုးရနှင့် UNHCR တို့မှ လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ကြရန် ဟူသည့် သဘောတူညီချက်အတိုင်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။
Source by : The Star ( မောင်ပါလ)
Posted by မောင်စေတနာ at 8:06 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:15 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 8:08 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
6P အစီအစဉ် ဖမ်းဆီးအရေးယူမှု အစိုးရ၀န်ထမ်း ၄ သန်း အသုံးပြုမည်
KHT/ PUTRAJAYA-6Pအစီအစဉ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများနှင့် ရှောင်ပြေးခဲ့သည့် အလုပ်ရှင်များကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အရာရှိ ၄ သန်းကျော်ကို နိုင်ငံတ၀န်းတွင် ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လ၀က)က နယ်စပ်၊ မြို့နှင့် ပင်လယ်များတွင် ယင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ဦးဆောင် လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ယူထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Tan Sri Mahmood Adam က ပြောသည်။
“အရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့ အဖွဲ့ကို ရဲလာ ၃၀၀၀၊ ရဲအရာရှိ ၁၂၅၀၀၀နဲ့ စစ်တပ် အင်အား ၁၁၀၀၀၀ အသုံးပြုသွားပါမယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် သူက ဆိုသည်။
ယင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ပြည်တွင်း သုံးစွဲသူနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် အိုးအိမ် ၀န်ကြီးဌာန၊ တော်ဝင် မလေးရှား အခွန်ဌာနနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသား ကာကွယ်ရေး ဌာနတို့က ထောက်ခံခဲ့သည်။
၁၉၅၉/၁၉၆၃ လ၀က ဥပဒေ၊ နိုင်ငံကူးလတ်မှတ် ဥပဒေ ၁၉၆၆ စသည့်တို့ အောက်တွင် လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများသာလျှင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် အဖွဲ့များက လ၀ကနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုသည်ဟုလည်း Mahmood ကပြောသည်။
“အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားလုံးအတွက် ဗျူဟာတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လ၀က က တာဝန်ရှိဆုံးပါ၊ ပြည်နယ်အဆင့်တွေနဲ့လည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်၊ အရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့ စာရင်းတွေကို ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး 6P အစီအစဉ် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီကို နေ့စဉ် အစီရင်ခံစာတွေ တင်သွင်းရပါမယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့များ၏ ပထမဆုံး အစည်းအဝေးတွင် ယင်းသို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Mahmood ကပြောသည်။
“အစည်းအဝေးက အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာကို အစိုးရက စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လို ချဉ်းကပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်တွေ သုံးသုံးမလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ပြည်ထဲရေးရဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပေါ် အခြေခံ၍ မှတ်ပုံမတင်ခဲ့သော တရားမ၀င် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများနှင့် ရှောင်ပြေးခဲ့သည့် အလုပ်ရှင်များ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတ၀န်း ရှိ လ၀က ရုံးများတွင် လာရောက်ဝန်ခံရန် အချိန်တခု ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“တချိန်တည်း အလုပ်ရှင်တွေကလည်း အလုပ်သမားတွေကို မူရင်းတိုင်းပြည်ကို ပြည်ပို့ဖို့ ဥပဒေနဲ့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်၊ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို သူတို့ ပေးရမှာပါ” ဟု Mahmoodက ပြောသည်။
နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်ကို မကြာမီ ကြေညာရန်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တနလာင်္နေ့တွင် 6P အစိအစဉ်၏ ဒုတိယ အဆင့်ဖြစ်သည့် တရားဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း အဆင့်ကို စတင်မည်ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင် ၁၃ မှ သြဂုတ် ၃၁ ထိ တရားမ၀င်နှင့် တရားဝင်နိုင်ငံခြားသား စုစုပေါင်း ၂၃၂၀၀၃၄ ဦး မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခြံလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ လယ်ယာနှင့် ၀န်ဆောင်မှု စသည့် ကဏ္ဍ ၅ ခုတွင် အလုပ်သမား များကို ထားသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု လက်ထောက် ၀န်ကြီးချုပ် Tan Sri Muhyiddin Yassin က ပြောကြားခဲ့သည်။
6P အစီအစဉ်တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တရားဝင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် စီစဉ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း နှင့် နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း စသည့်အဆင့် ၆ ဆင့် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Source by :http://www.thuriyanews.com/
Posted by မောင်စေတနာ at 12:55 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မောင်စေတနာ at 1:39 PM4comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, November လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း ...
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, October လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
ဒီလတွင်း အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အနည်းငယ်ကောင်းမွန်လာမည်။ အလုပ်ကောင်းသော်လည်း စိတ်ပျော် ရွှင်မရှိပဲ ဖြစ်နေမည်။ အထက်လူကြီးနဲ့ ပြသာနာကိစ္စများ ဖြေရှင်းရမည်။ အလုပ်ကိစ္စများ အတွက်နဲ့ စကားများရမည်။ အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ် နေရာပြောင်း လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။
ညီအစ်ကို မောင်နှမများ မိသားစု အတွင်း လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလာမည်။ လူမှုရေး ကိစ္စများအတွက်နဲ့ အနည်းငယ် စိတ်ညစ်နေရမည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ မရခင် ကုန်ကျများနေမည်။ အဖတ်မတင်သေးပါ။ အလှူအတန်းကိစ္စများ ပရဟိတကိစ္စများပြုလုပ်ရမည်။ ခရီးသွားရမည်။ စနေနံ ပစ္စည်းများ ဝင်လာမည်။
ပညာရေး ရည်မှန်းချက် အသစ်ပေါ်လာမည်။ အဆင်ပြေလာမည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးကိစ္စများ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ကောက်နေရသော ပြသာနာများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနေရသော အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွက် အအေးမိခြင်း ၊ ဦးခေါင်းပိုင်း ကျန်းမာရေးညံ့ ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် ပန်းသီး ၃ လုံး လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်း ။ ။52 8 1
ဒီလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ အဆင်လာနေသော အချိန်လေးပါ။ ဆက်လက်ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ အကြံညဏ်ပေးသူ ကူညီပေးသူများ ရှိလာမည်။ အလုပ်ကိစ္စများတွင် ဆက်ဆံနေရသော လူအများနှင့် အနည်းငယ် ပြသာနာ ဖြစ်မည် စကားများရမည်။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ အဆင်ပြေလာမည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေစုမိနေမည်။ စက်ပစ္စည်း အသစ်ထပ်ဝင်မည်။ လူဝင်မည်။ ကြာသပတေးနံ အတွက် အနည်းငယ် စိတ်ညစ်နေရမည်။ အဝတ်အထည် ဝင်မည်။ အိမ်မက်ကောင်း မက်လာမည်။ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် မိမိ် ပါဝင်ဆောင်ရွှက်ပေးရမည်။
ပညာရေး ကိစ္စများ ကြိုးစားနေရမည်။ သင်တန်း ကိစ္စများများ လေ့လာတက်ခွင့် ရမည်။
ယခုလတွင်း အချစ်ရေးကိစ္စများ နီးရက်နဲ့ ဝေးနေရမဲ့ အချိန် ဖြစ်နေမည်။ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ အဆင်မပြေ ဖြစ်ဖြစ်နေမည်။
ယခုလ အတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ဇက်ကြောတက်ခြင်း ၊ ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် တနင်္လာနေ့တွင် လိမ္မော်သီး ၄ လုံးကို မိမိ နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း၍ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလ အတွက် ကံကောင်း အကျိုးပေး သောဂဏန်းများ ။ ။32 8 6
ယခုလ အတွင်း အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော အချိန်ဖြစ်ပါ၍ ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ စမ်တူကိစ္စများ အလုပ်များ လုပ်ဆောင်ရမည်။ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေမည်။ အကူညီပေးသူ ပေါ်မည်။ အကူအညီပေးသူ ပေါ်လာမည်။ ငွေဝင်မည်။ ဗုဒ္ဓ္ဓဟူးနံ ဝင်မည်။ လူဝင်မည်။ မိသားစု အတွင်း အနည်းငယ် စကားများနေရမည်။ ပျော်စရာကောင်းသော နေရာသို့ ခရီးထွက်ရမည်။
ပညာရေး ကံကောင်းနေသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေသေးပါ။ ဝေးနေရမည်။ ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ခေါင်းမူး ၊ ခေါင်းကိုက် ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက အင်္ဂါနေ့ နံနက်တွင် သရက်သီး ၆ လုံးကို နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်းများမှာ ။ ။9000
ယခုလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ အလုပ်ထဲတွင် စိတ်မပျော်ပဲ ဖြစ်နေမည်။ ဟိုဟာလုပ်ရမလို ဒီဟာလုပ်ရမလိုနဲ့ အချိန်ကုန်နေမည်။ ယခုလအတွင်း စမ်တူလုပ်ငန်းများ သတိထား၍ လုပ်ပိုင်ပါ။ အထက်လူကြီးထံမှ အကူအညီရမည်။ ဒီလအတွင်းမှာ စိတ်ညစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရမည်။ စီးပွားရေးမှာ ခဏလေးတော့ စောင့်ရဦးမည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ အဖက်ဖက်က ငွေဝင်ကိန်း ရှိပါသည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ကတော့ ချက်ချင်းလိုတဲ့ ငွေကိုချက်ချင်း ရှာလို့ မရဘူးနော်။ သဘောက ခဏစောင့်ရဦးမှာပါ။ စိတ်နှစ်ခွ ကိုယ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေမည်။ ငွေဝင်နေသော်လည်း မစုမိသေးပါ။ခရီးတွေက ရုတ်တစ်ရက်သွားလာခြင်း ရှောင်ပါ။ သူတစ်ပါးကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ရှပ်နေမည်။
ပညာရေး ကံကောင်းနေသော အချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး ကိစ္စများလည်း အောင်မြင်လာမည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးကိစ္စများ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ စိတ်ပူစရာ မရှိပါ။ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလ အတွင်း ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ ခါးနာမည် ၊ ခြေထောက်နာမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် ဗုဒ္ဓ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တွင် နို့ ၇ ခွက်ကို နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။ 869 6
ဒီလအတွင်း အလုပ်အကိုင်များ မိမ်ိဖြစ်ချင်တာတွေ မျှော်လင့်တာတွေ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အလုပ်အကိုင်များတွင် အထက်လူကြီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခက်ကြုံနေရမည်။ အဆင်ပြေမည့် လမ်းစများ ပေါ်ပေါက်လာမည်။ အကူအညီပေးသူများ ပေါ်မည်။ စမ်တူကိစ္စများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အနည်းငယ် စိတ်ညစ်နေရမည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေလာမည်။ ငွေဝင်မည့် လမ်းစပေါ်မည်။ ငွေကြေးကိစ္စများတွေမှာ အဆင်ပြေနေမည်။ ငွေဝင်မည့် လမ်းစပေါ်မည်။ ယခုလအတွင်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ ရွှေဝင်မည်။ ထီကံကောင်းလာမည်။ အဝတ်အထည် အသစ်များ ဝင်မည်။
ပညာရေး ပုံမှန် သင့်တင့် ရှိနေသော အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေး ကိစ္စများ ပျော်စရာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူမရှိရင် ချစ်သူရမည်။ စန်းပွင့်နေမည်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ စကားများနေရသော အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွင်း မျက်စီအားနည်းမည် ၊ သွားနာ သွားကိုက် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက်တွင် သြဇာသီး ၅ လုံးကို နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။69 8 9
ယခုလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ ပုံမှန်အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားမတက်သလို စီးပွားမကျသေးပါ။ ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လမ်းစပေါ်လာမည်။ ယခုလအတွင်း အလုပ်ကိစ္စများ အတွက်နဲ့ စိတ်တိုင်းမကျသော်လည်း အနည်းငယ် အဆင်ပြေလာမည်။ စမ်တူကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။
ငွေကြေး ကိစ္စများ အတွက်နဲ့ စိတ်ပူပင်နေရမည်။ ရသမျှကုန်နေမည်။ မစုမိသေးပါ။ ငွေဝင်နေမည်။ မိသားအတွင်းမှ ကူညီသူပေါ်မည်။ ရုတ်တစ်ရက် ငွေဝင်ပြီး ရုတ်တစ်ရက် ကုန်နေမည်။ကြွေးတင်မည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စများ အတွက်နဲ့ အနည်းငယ် စိတ်ညစ်ရမည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့
အဆင်မပြဖြစ် တတ်ပါသည်။ အိမ်မက်ကောင်း မက်လာမည်။ ထီကံစမ်းပါ။
ယခုလအတွင်း ပညာရေးကိစ္စများ ကြိုးစားနေရသော အချိန်လေးပါ။
ယခုလအတွင်း အချစ်ရေး ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေမည်။ စကားများနေရမည်။ ယခုလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက် ကျန်းမာရေးညံ့မည်။
ယခုလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ အိပ်ရေးပျက်မည်။ စိတ်ပင်ပန်း ၊ ကိုယ်ပင်ပန်း ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် သောကြာနေ့ နံနက်တွင် ဇီးသီး ၈ လုံးကို နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။54 8 4
ယခုလအတွင်း အလုပ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ အတိုက်အခံများကို အောင်မြင်လာမည်။ အလုပ်အတွင်း ကောင်းသောကိစ္စများ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာမည်။ အဆင်ပြေလာမည်။ အလုပ်များ အဆင်ပြေလာသော်လည်း စိတ်တိုင်းမကျသေးပဲ ဖြစ်နေမည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ ကံကောင်းလာမည်။ ချေးဌားခြင်း ခဏရှောင်ပါ။ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါသည်။ လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် ကူညီပေးနေရမည်။ ဘာသာရေး ကိစ္စများ အလှူအတန်းကိစ္စများ ပြုလုပ်ရမည်။ ရွှေဝင်မည်။ မိသားစု အတွင်းလူဝင်လာမည်။ စနေနံကိစ္စများ အတွက် အနည်းငယ် စိတ်ညစ်နေရမည်။
ယခုလအတွင်း ပညာရေးကိစ္စများ အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေလာမည်။ ဝေးကွာ နေရသော ချစ်သူများ ပြန်လည် ဆုံဆည်းခွင့် ရမည်။ ယခုလ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော်လည်း သူတစ်ပါးအတွက်နဲ့ စကားများ နေရမည်။
အခုလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ စက်ပစ္စည်း ထိမိခိုက်မိ ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် စနေနေ့ နံနက်တွင် သောက်တော်ရေ ၄ ခွက် နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ကံကောင်းသော ဂဏန်းများ ။ ။3259
2011-November လတွင် မိမိရဲ့ဘဝလေး များလည်း(၁၁)မီးငြိမ်း၍ အေးချမ်းပါစေ။ စေတနာမှန်၍ စိတ်ကောင်းထားတတ်သူတိုင်း ကံကောင်းကြပါစေ။ ...... ဆရာမျိုးဟန်ကို
November လတွင်း မိမိရဲ့ဘဝလေး များလည်း (၁၁) မီးငြိမ်း၍ အေးချမ်းပါစေ။ ဆက်သွယ်ရန် - ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် - ဆရာမျိုးဟန်ကို - NO. 314 , Block P/B , Jin Cheras Taman Cheras ,56100 Kuala Lumpur Malaysia - http://www.myohanko.br.ms - myohankonew@gmail.com - Ph; 017, 226 0715 - စေတနာ မှန်၍ စိတ်ကောင်း ထားတတ် သူတိုင်း ကံကောင်း ကြပါစေ။
Source by : http://www.myohanko.br.ms/
Posted by မောင်စေတနာ at 11:41 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
(အောက်ဖော်ပြပါသတင်းက ဘန်ကောက်ပို့စ်က သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်က မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိရေး ဘာသာပြန်ဖော်ပြကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတာကို Sandah Aung က ဘာသာပြန်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
ပစ္စည်းလှောင်ခြင်းနှင့် မတရား အမြတ်တင် ရောင်းချခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ထိုင်းအစိုးရက ရေဘေးကာလအတွင်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ကုန်စည်များရောင်းချရန် ဈေးနှုန်းများကို အကြံပြု ကြေညာလိုက်သည်ဟု လက်ထောက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဖွန် ဆာရာဖောက တနင်္လာနေ့တွင် ပြောကြားသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ၎င်း၏ ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ် ကုန်စည်စာရင်းတွင် ရေဘေးအတွက် လိုအပ်သော ကုန်စည်များကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်တွင် ထိုကုန်များအား သိုလှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးဌာနက ထိုကုန်များကို ရောင်းချသင့်သည့်ဈေးနှုန်းများကို အကြံပြုခဲ့သည်ဟု မစ္စတာ ဖွန်ကဆိုသည်။
၆၀၀ စီစီ သောက်ရေသန့်ဘူး၏ ဈေးနှုန်းကို ခုနစ်ဘတ်အထက် ဈေးနှုန်းဖြင့် မရောင်းရန်လည်းကောင်း၊ ၇၅၆ စီစီ ရေသန့်ဘူးကို ကိုးဘတ်ထက် မရောင်းရန်လည်းကောင်း၊ ၁.၅ လီတာဘူးကို ၁၄ ဘတ်ထက် ပိုမရောင်းရန်လည်းကောင်း လက်ထောက်ဝန်ကြီးက အကြံပြုလိုက်သည်။
ရေးဘေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားကုန်များအတွက် အကြံပြုဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ဆယ့်ငါးကီလို သဲအိတ်တစ်အိတ်လျှင် ၄၅ ဘတ်စီ
အင်္ဂတေတုံး ၁၀ ဘတ်စီ
အသက်ကယ် အင်္ကျီ ၄၅၀ ဘတ်စီ
လူနှစ်ဦးဆန့် ဖိုင်ဘာလှေ ၄၅၀၀ ဘတ်စီ
လူလေးဦးဆန့် ဖိုင်ဘာလှေ ၆၅၀၀ ဘတ်စီ
ရာဘာလှေ တစ်စုံလျှင် ၂၀၀ ဘတ်စီ
ဂါလံနှစ်ဆယ်ဆန့် ရေတိုင်ကီ ၃၅၀ ဘတ်စီ
ဂါလံလေးဆယ်ဆန့် ရောတိုင်ကီ ၆၀၀ ဘတ်စီ
ရေစုတ်စက် ၄၅၀၀ ဘတ်စီ
ရေဘေးနှင့် သက်ဆိုင်သောကုန်များကို အကြံပြုဈေးနှုန်းထက် ပိုမိုရောင်းချပါက ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်ကျခံပြီ ငွေဒဏ် ၁၄၀ ၀၀၀ ဘတ် ပေးဆောင်ရမည်ဟု မစ္စတာ ဖွန်ကဆိုသည်။
တိုးမြင့်လာသေ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည်ဆည်းရန်နှင့် အမြတ်ကြီးစား ကုန်သည်များ ဈေးမကားနိုင်စေရန် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အရှေ့မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းဒေသများမှ ရေသန့်ထုတ်သူများကို ရေဘေးသင့် ဗဟိုလွင်ပြင်ဒေသသို့ တတ်နိုင်သရွေ့ တင်ပို့ရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု မစ္စတာ ဖွန်က ပြောကြားသည်။
ကြက်ဥများ ပြတ်လတ်လျက်ရှိသည်ဟူသော သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း မဟုတ်မှန်ဟု ဥစားကြက် မွေးမြူသူများအသင်းက ပြောကြားသည်။ ရေဘေးကြောင့် ဥစားကြက်ခြံ ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ပျက်ဆီးသည်ဟု သိရသည်။
ရေဘေးသတိပေးကြေညာချက်များကြောင့် ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ကာ ကြက်ဥများ စုဆောင်းခြင်းကြောင့် ကြက်ဥပြတ်လတ်သည်ဟု ထင်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို ဥစားကြက်မွေးမြူသူများအသင်း ဥက္ကဌ မနော့ ကျူတက်တက်က ရှင်းပြသည်။
တစ်နေ့လျှင် ကြက်ဥ ၂၈ သန်းနှင့် ၂၉ သန်းကြား ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဥစားကြက်ခြံများမှာ ပြဿနာ အနည်းငယ်သာ တွေ့ကြုံရကြောင်း သိရသည်။
ကြက်ခြံတချို့တွင် ဥစားကြက်များ သေဆုံးခဲ့သော်လည်း ကြက်မွေးမြူသူများက အချိန်မှီ ဖယ်ရှားခဲ့သဖြင့် ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကြက်ဥတစ်ဥလျှင် ပေါက်ဈေး သုံးဘတ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 12:22 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
လင်မယားနှစ်ဦး လိင်ဆက်ဆံ နေပုံကို ဗီဒီယို ခိုးရိုက်ခဲ့လို့ ဓားထိုးခံရ
သူတစ်ပါးလိင်ကိစ္စအား ချောင်းမြောင်း ကြည့်ရှု တတ်သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ အိမ်နီးချင်း လင်မယား လိင်ဆက်ဆံနေကြပုံကို ချောင်း မြောင်းကာ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခဲ့ရာ အဆိုပါ အိမ်နီး ချင်းမှ ဒေါသထွက်ကာ ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
အိမ်နီးချင်းလင်မယား လိင်ဆက်ဆံနေ သည့် ဗီဒီယိုအား ထိုအိမ်နီးချင်း၏ သားကိုပင် ပြသခဲ့သည့် အဆိုပါ လိင်ကိစ္စ ချောင်းမြောင်း ကြည့်ရှုသူမှာ La Kampo ဆိုသူ ဖြစ်သည်။ ရဲမှ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းအား ဓားထိုးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး La Kampo ၏ အလောင်းကိုမူ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ ည ၇း၃၀ ခန့်တွင် La Kampo သည် ဂျလန်း အူတာရာရှိ ၎င်းတို့ရွာရှိ အိမ်နီးချင်း၏အိမ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး စကား စမြည် ပြောဆိုပြီးနောက် အိမ်နီးချင်းတို့၏ အ၀တ် အစားမပါသော ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးထားမှု အကြောင်းကို ၁၇ နှစ် အရွယ်ရှိ အိမ်နီးချင်း၏ သားဖြစ်သူအား ပြောပြခဲ့သည်။
သားဖြစ်သူ ၎င်းအား မသိကျိုးကျွန်ပြု သောအခါ La Kampo သည် မီတာ ၂၀ ဝေးသော ၎င်း၏အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်းသည် La Kampo ၏ အိမ် သို့ သွားခဲ့ပြီး ဒေါသအလွန်ထွက်ကာ ဓားဖြင့် ထပ်တလဲလဲ ထိုးခဲ့ဟန်တူသည်။
La Kampo သည် အဆင့်ဆင့် ထိုး သွင်းထားသော ဓားဒဏ်ရာများနှင့် သွေးအိုင်ထဲ တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းသည် လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သော ဓားကိုယူကာ အခင်းဖြစ်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ရဲစခန်းသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။
ဆန်ဒါကန်းရဲအရာရှိ Rowell Marong မှ ပြောကြားရာတွင် နှစ်ဦးစလုံးမှာ အင်ဒိုနီးရှား လူမျိုးများဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းသမား များဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
Source by : ရိုးရိုး (သတင်းကွန်ယက်)
Posted by မောင်စေတနာ at 7:00 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest